laxmi unnati kosh(laxmi unnati kosh) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आजसम्म कायम इकाइधनीले लक्ष्मी उन्नति कोषको २५% नगद लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषले गत आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको नगद लाभांश सुरक्षित गर्ने आज साउन १२ गते अन्तिम मौका रहेको छ। योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालक समितिले नगद लाभांश प्रयोजनार्थ भोलि साउन १३ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज साउन...
कहिलेसम्म कायम इकाइधनीले लक्ष्मी उन्नति कोषको २५% नगद लाभांश पाउनेछन् ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नगद लाभांश घोषणा गरेको लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषले बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले यो नगद लाभांशका लागि यही साउन १३ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ यो योजनामा साउन १२ गतेसम्म कायम...
लक्ष्मी उन्नति कोष : इकाइमूल्य १०.०४%ले बढ्यो, नेप्से के भन्छ ?
काठमाण्डौ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा कुनै पनि कम्पनी वा योजनाका सेयर वा इकाइमूल्य कारोबार अवधिमा १० प्रतिशत घटबढ भएमा सर्किट लाग्छ। यदि कुनै पनि कम्पनी तथा योजनाका सेयर वा इकाइमूल्यमा १० प्रतिशतले बढोत्तरी भएमा पोजिटिभ र गिरावट आएमा नेगेटिभ सर्किट लाग्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज मंगलबारको कारोबारमा भने लक्ष्मी म्युचुअल...
लक्ष्मी उन्नति कोषले इकाइधनीलाई २५% नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। लक्ष्मी बैंकद्वारा प्रवर्द्धित तथा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट योजना व्यवस्थापक रहेको यस योजनाका इकाइधनीहरुका लागि नगद लाभांश घोषणा गरिएको हो। सञ्चालक समितिको आज मंगलबार बिहान बसेको बैठकले यस योजनाका...
भोलिबाट लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइ कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरु भोलि सोमबारबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आइतबार यो म्युचुअल फन्डका रु. १० अंकित दरका ६ करोड ५२ लाख ६२ हजार ३६० इकाइहरु सूचीकृत भएसँगै सोमबारबाट कारोबारमा आउने भएका हुन्। नेप्से र लक्ष्मी उन्नति कोषबीच आजै इकाइ सूचीकरण सम्झौता भएको...
लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरु खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरु खरिदका लागि आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ। यो म्युचुअल फन्डका इकाइहरु गत साउन ११ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको थियो। लक्ष्मी उन्नति कोषको प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ दरका ८ करोड इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड २० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाइ संख्याको...
सिभिल लघुवित्तको १००% हकप्रद आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सतप्रतिशत हकप्रद सेयर आज आइतबारबाट बिक्री खुला गरेको छ। संस्थाले चुक्तापुँजी ११ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँको १ः१ को अनुपात अर्थात विद्यमान एक कित्ता साधारण सेयरबराबर नयाँ एक कित्ता साधारण सेयर सेयरधनीहरुका लागि बिक्री खुलाएको हो। संस्थाले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ११ लाख...
लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरु आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरु आज आइतबार (साउन ११ गते) देखि सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको छ। लक्ष्मी उन्नति कोषको प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ दरका ८ करोड इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड २० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाइ संख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाइ कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंक...
लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइ साउन ११ गतेबाट बिक्री खुला गरिने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी म्युचुल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने लक्ष्मी उन्नति कोषका इकाइहरुआउँदो साउन ११ गतेदेखि सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिने भएको छ। लक्ष्मी उन्नति कोषको प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ दरका ८ करोड इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड २० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाइ संख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाइ कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंक...
रु. ८० करोडको ‘लक्ष्मी उन्नति कोष’ का इकाइहरु चैत ९ गतेदेखि बिक्री गरिने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापनमा तेस्रो म्युचुअल फन्डको आउँदो चैत्र ९ गतेदेखि बिक्री खुलाउने भएको छ। कम्पनीले रु. ८० करोड रुपैयाँको ‘लक्ष्मी उन्नति कोष’ नामक म्युचुअल फन्डको बिक्री खुलाउने भएको हो। रु. १० रुपैयाँ प्रति इकाइ दरका ८ करोड इकाइ बिक्री गरिनेछ। कुल इकाइमध्ये न्यूनतम १ करोड २० लाख वा कुल बिक्री...
कोरोनाको त्रास: संसद एक साताका लागि स्थगित हुने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास उत्पन्न भएपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद बैठक एक साताका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि पर्याप्त पहल सरकारले नगरेको भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेला सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद् बैठक एक साताका लागि स्थगित गर्ने बताएका...
लक्ष्मी क्यापिटलले तेश्रो म्युचुअल फण्ड ल्याउने, बोर्डमा आवेदन
काठमाण्डौ । लक्ष्मी क्यापिटल लिमीटेडले आफ्नो व्यवस्थापनमा तेश्रो म्युचुअल फण्ड समेत संचालन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्मी उन्नति कोष नामको म्युचुअल फण्ड संचालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । कम्पनीले १० रुपैयाँ प्रति इकाई दरका ८ करोड इकाई बिक्री गरी यो स्किम संचालन गर्न चाहेको हो । धितोपत्र...